Ipinki: Lapho Ibhizinisi Litholakala | Martech Zone
Ipinki: Lapho iBusiness Is Bare
NgoMsombuluko, Juni 1, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lapho indodakazi yami eneminyaka engu-15 ifika ekhaya iphethe isikhwama iVictoria Secret esandleni ngacishe ngaba nesifo sohlangothi. Ngiyakwamukela konke ukuphawula kulokhu okuthunyelwe mayelana nokuthi kufanele ngibe ubaba omubi kanjani nokuthi kufanele ngiqaphele kangcono imikhuba yokuthenga yendodakazi yami.
Ngokwethembeka, bengingacabangi ukuthi kunesizathu sokuthi ayothenga eVictoria Secret iminyaka eminingi, eminingi. Uyazi… emva kokuba sengifile.
Bonke abangane bamadodakazi ami bagqoke izingubo ezifanayo ezisesitayeleni njengamanje… ezinelebuli pink ezinqeni zabo. Ngabona ukuthi bekuwumkhiqizo omusha, obizwa ngegama elibusayo ukuheha izintokazi. Kuvela ukuthi ngangiqinisile, kepha bengingazi ukuthi uVictoria Secret ubesemva kwayo. IVictoria Secret iphuma nayo yonke pink umugqa - ngewebhusayithi yePinki, umugqa weCollegiate wePinki, inethiwekhi yokuxhumana ebizwa ngokuthi Isizwe Esiphinki - ongakwazi ukugunyaza ngayo Facebook kunjalo, umculo, okulandwayo ngisho nomklami wesikibha.
Ngingaqonda ukuthi iVictoria Secret ifisa ukwandisa amaqoqo ayo futhi ifinyelele emaqenjini ahlukene wabantu, kepha ukufinyelela ebusheni obusha kushaya kancane kakhulu nasekhaya. Njengomngane omuhle u-Adam Small (I-Indianapolis Marketing Marketing) washo kahle kakhulu,
I-Pink ibonakala njengesidakamizwa esangweni leVictoria Secret yokuthola abesifazane abasebasha babanjwe ngophawu lwabo eminyakeni yobudala.
Okungithusile kakhulu ukuthi iVictoria Secret ngokusobala iveze intsha esencane njengethuba elisha lemakethe. Izingubo zithengeka kakhulu kunezimbangi i-Abercrombie & Fitch neHollister… futhi kuyavela intsha inciphisa izindleko njengawo wonke umuntu.
Ngokwami, ngifisa ukuthi ulayini womkhiqizo ubize kakhulu kumntwana wami oneminyaka engu-15.
Ukuphelela kweBrand kufile
UJun 2, 2009 ngo-1: 42 AM
Ngiyaxolisa angikwazi ukusho lokho ongathanda ukukuzwa, ngangishadile ngemuva kweviki elilodwa ngibe neminyaka eyi-17. Ngiyazi ukuthi kunjani ukuba ngowesifazane / ingane. Lesi yisikhathi esinzima kakhulu samantombazane, kungazelelwe umhlaba wonke ubabhekile, futhi bangABESIFAZANE, hhayi amantombazane. Iseluleko sami kuphela ukwenza isiqiniseko sokuthi uyazi ukuthi umthanda kangakanani nokuthi ukhona yini ngaye - noma ngabe kunjani - futhi umnikeze namathuba amaningi okwenza imisebenzi enzima kanye nezibopho ukuze akwazi ukusebenza ekukhuleni. Qiniseka ukuthi uyazi ukuthi kulungile ukuphathwa kahle nangenhlonipho ngabafana, futhi ube khona ukuze umbambe lapho ewa. (Ngabe lokhu kuzwakala njengekhadi lokubingelela? Uxolo) Ngokuya ngePINK, ngibonile ukuthi emsebenzini abanye besifazane abasebasha baqala ukuthumela ama-imeyili ebhizinisi ngohlobo olupinki, ahlobene nokungajwayelekile? Futhi manje njengoba sengimdala, ngiyavuma, ngifisa ukuthi ukumakethwa kwezocansi kwabesifazane abasebasha kwakungathandwa kangako - noma kwamukelwe.
UJun 2, 2009 ngo-5: 15 AM
Usiza ukungicacisela into eyodwa futhi yingakho amantombazane amaningi kangaka enegama elithi iPINK ezinqeni zawo. Manje sengiyazi! Ngiyabonga ngokungifundisa nokunginikeza ifolishi uma indodakazi yami eneminyaka eyi-8 ingake ifune i-PINKwear. Ngeke kwenzeke (okwamanje lokho).